NUGအစိုးရ၏ “D-Day”ကွညောခကျြအပျေါ မအလတို့ရဲ့ တုနျ့ပွနျစကား – Shwe Yaung Media
NUGအစိုးရ၏ “D-Day”ကွညောခကျြအပျေါ မအလတို့ရဲ့ တုနျ့ပွနျစကား
ကုလသမဂ်ဂအထှထှေညေီလာခံ နီးလာသောကွောငျ့ D-Dayလုပျဆောငျခွငျး ဖွဈနိုငျကွောငျး စ.ဈကောငျစီ၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွညျတှငျးမီဒီယာတဈခု၏ အငျတာဗြူးတှငျ တုနျ့ပွနျ ပွောကွားသညျ။ ….”သူတို့အနနေဲ့ကတော့ဗြာ D Day စပွီမဟုတျဘူး၊ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနကေ့တညျးက
အခုဟာက ကုလသမဂ်ဂမှာ ညီလာခံလညျးနီးလာ တဲ့အခြိနျမှာ လုပျတာပဲဖွဈမှာပါ။”…. NUGက ပွညျသူတှေ၊ အစ.ှနျးရောကျတှကေို မွှောကျပငျ့ပေးခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ၎င်းငျးတို့အနဖွေငျ့
လကျတှဘေ့ဝတှငျ မရှိကွောငျးနှငျ့ နိုငျငံမတ.ညျမငွိမျ ဖွဈလာ‌စရေနျအတှကျ လုပျဆောငျနခွေငျးဖွဈကွောငျးနှငျ့ ကုလသမဂ်ဂညီလာခံ နီးလာသညျ့အခြိနျတှငျ စတငျလုပျဆောငျခွငျးဖွဈကွောငျး ဖွကွေားထားသညျ။ ထို့အပွငျ ကာကှယျရေး၊ လုံခွုံရေးနှငျ့ ပတျသကျပွီး
တပျမတျော၊ မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့အပွငျ အခွား မိတျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားဖွငျ့ စိစဈဆောငျရှကျထားပွီးဖွဈကွောငျးလညျး ဖွကွေားထားသညျ …”ကာကှယျရေးနဲ့ လုံခွုံရေးအခွအေနအေရ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာပွောခဲ့သလိုပဲ တဈနိုငျငံလုံးမှာတော့
အပွညျ့အဝတော့ မရသေးဘူး။ သို့သျော ဖ.မျးဆီ.းရမိမှုတှေ ပွညျသူလူထုရဲ့ ဖျောထုတျခကျြတှေ၊ ပူပေါငျးခကျြတှကွေောငျ့ တျောတျောမြားမြားမှာ လုံခွုံရေး၊ ကာကှယျရေးနဲ့ပတျသကျပွီး တိုးတကျထားရှိပွီးဖွဈပါတယျ။
သူတို့အနနေဲ့ပွညျသူလူထုကိုထ.ိခို.ကျစနေိုငျတဲ့နရောတှမှော အခြိနျကိုကျမ.ိုငျး တ.ိုကျခ.ိုကျတာ၊လုပျလာနိုငျပါတယျ။ ဒါတှကေိုတော့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ဘယျသူပဲလုပျလုပျ ဖျောထုတျဖ.မျးဆီ.းနိုငျတာတို့၊ နောကျဆကျတှဲသတငျးတှအေရ ဆကျစပျဖျောထုတျတာတို့ ရရှိပွီးဖွဈပါတယျ။
ကာကှယျရေး လုံခွုံရေးနဲ့ပတျသကျပွီးလညျး တပျမတျော၊ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့နဲ့ ကနျြတဲ့မိတျဖကျအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ စိစဈဆောငျရှကျပွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပွညျသူလူထုအနနေဲ့ ဘာမှထူးပွီးစ.ိုးရိမျထ.ိတျလ.နျ့နစေရာမလိုပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သတိရှိဖို့တော့လိုပါတယျ။
မနကေ့ ရနျကုနျမှာဖွဈခဲ့တဲ့ ဖွဈစဉျလိုမြိုး ဘောဂသိဒ်ဓိမှာ ဖွဈခဲ့တာဆိုရငျ အပွ.ဈမ.ဲ့ပွညျသူေ.သဆုံ.းသှားတာပေါ့။ ဗုံ.းကိုေ.ထာငျခငျြတဲ့နရောမှာေ.ထာငျပွီး စ.ဈရေးနရော လညျးမဟုတျဘူး၊ လုံခွုံရေးနရောလညျး မဟုတျဘူး။
အရပျသားတှရေဲ့နရောမှာေ.ထာငျခငျြတဲ့နရောမှာေ.ထာငျထားခဲ့တယျ။ အဲဒီလုံခွုံရေးတဈယောကျနဲ့ အပွ.ဈမ.ဲ့ပွညျသူတဈယောကျေ.သဆုံ.းသှားတဲ့ဖွဈစဉျရှိတယျ။ ဒီလိုမြိုးတှလေုပျလာနိုငျတယျ။ သတိရှိဖို့လိုပါတယျ”…။ ယနတှေ့ငျ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ (NUG)က
ေ.တျာလှ.နျရေးစတငျပွီဟု ကွညောလိုကျပွီးနောကျ ရနျကုနျမွို့တှငျးရှိ မွို့နယျအခြို့တှငျ စ.ဈကောငျစီတပျမြား လှညျ့လညျသှားနကွေပွီး၊ လူငယျမြားအား အင်ျကြီခြှတျ၍ စ.ဈဆေးခွငျးမြားပငျ လုပျဆောငျနသေညျ။
NUGအစိုးရ၏ “D-Day”ကြေညာချက်အပေါ် မအလတို့ရဲ့ တုန့်ပြန်စကား
D-Dayလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း စ.စ်ကောင်စီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခု၏ အင်တာဗျူးတွင် တုန့်ပြန် ပြောကြားသည်။ ….”သူတို့အနေနဲ့ကတော့ဗျာ D Day စပြီမဟုတ်ဘူး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက
ဟိုနေ့စမယ်၊ ဒီနေ့စမယ်နဲ့လုပ်နေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပါ။ အခုဟာက ကုလသမဂ္ဂမှာ ညီလာခံလည်းနီးလာ တဲ့အချိန်မှာ လုပ်တာပဲဖြစ်မှာပါ။”…. NUGက ပြည်သူတွေ၊ အစ.ွန်းရောက်တွေကို မြှောက်ပင့်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနေဖြင့်
လက်တွေ့ဘဝတွင် မရှိကြောင်းနှင့် နိုင်ငံမတ.ည်မငြိမ် ဖြစ်လာ‌စေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ နီးလာသည့်အချိန်တွင် စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားထားသည်။
ထို့အပြင် ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အပြင် အခြား မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖြေကြားထားသည် …”ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့သလိုပဲ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာတော့
အပြည့်အဝတော့ မရသေးဘူး။ သို့သော် ဖ.မ်းဆီ.းရမိမှုတွေ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဖော်ထုတ်ချက်တွေ၊ ပူပေါင်းချက်တွေကြောင့် တော်တော်များများမှာ လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုးတက်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကို
ထ.ိခို.က်စေနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ အချိန်ကိုက်မ.ိုင်း တ.ိုက်ခ.ိုက်တာ၊လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်သူပဲလုပ်လုပ် ဖော်ထုတ်ဖ.မ်းဆီ.းနိုင်တာတို့၊ နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရ ဆက်စပ်ဖော်ထုတ်တာတို့ ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေး လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း တပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ကျန်တဲ့မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဘာမှထူးပြီးစ.ိုးရိမ်ထ.ိတ်လ.န့်နေစရာမလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ သတိရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။မနေ့က ရန်ကုန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်လိုမျိုး ဘောဂသိဒ္ဓိမှာ ဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင် အပြ.စ်မ.ဲ့ပြည်သူေ.သဆုံ.းသွားတာပေါ့။ ဗုံ.းကိုေ.ထာင်ချင်တဲ့နေရာမှာေ.ထာင်ပြီး စ.စ်ရေးနေရာ လည်းမဟုတ်ဘူး၊ လုံခြုံရေးနေရာလည်း မဟုတ်ဘူး။ အရပ်သားတွေရဲ့နေရာမှာ
ေ.ထာင်ချင်တဲ့နေရာမှာေ.ထာင်ထားခဲ့တယ်။ အဲဒီလုံခြုံရေးတစ်ယောက်နဲ့ အပြ.စ်မ.ဲ့ပြည်သူတစ်ယောက်ေ.သဆုံ.းသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လာနိုင်တယ်။ သတိရှိဖို့လိုပါတယ်”…။ ယနေ့တွင် အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ (NUG)က
ေ.တ်ာလှ.န်ရေးစတင်ပြီဟု ကြေညာလိုက်ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ မြို့နယ်အချို့တွင် စ.စ်ကောင်စီတပ်များ လှည့်လည်သွားနေကြပြီး၊ လူငယ်များအား အင်္ကျီချွတ်၍ စ.စ်ဆေးခြင်းများပင် လုပ်ဆောင်နေသည်။
ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ ကမ်ဘာကြျောမငျးသားခြောပိုငျတံခှနျအတှကျ ထိုငျးလူမြိုးမှားမှသီဆိုဂုဏျပွုထားတဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတဈပုဒျ
“မိုးမကုနျမခငျြး တနျးမဖွုတျရနျနှငျ့ လိုအပျပါက ထမငျးပါကြှေးထားမညျ” ဟု အာဏာသိမျးစဈခေါငျးဆောငျမှ မှာတမျးခြှေ
အာနန်ဒာဘုရားမှပြောကျဆုံးသှားသော စိနျပွာကွီး (ဝါ) ကြိနျစာသငျ့သညျဟုယုံကွညျခဲ့ကွသော စိနျပွာကွီး